फेरी पुरै देश नै ब’ न्द हुने सरकारको घो’ षणा, आखिर कहिले बाट? हेर्नुहोस मिती समाचार – Dainik Sangalo
फेरी पुरै देश नै ब’ न्द हुने सरकारको घो’ षणा, आखिर कहिले बाट? हेर्नुहोस मिती समाचार
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ समय: ११:०९:४९
पछिल्लो समय काठमाडौ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा फेरी सं’ क्रमित बढ्न थालेका छन् । काठमाडौको अस्पतालहरुका वेड सं’ क्रमितले भरिन थालेका छन् । एक सातादेखि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका बेड कोरोना सं’ क्रमितले भरिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। टेकु स्थित अस्पतालमा संक्रमितका लागि ४० वेड छुट्याइएको छ । ति सबै वेड सं’ क्रमितले भरिएका छन् ।
आउँदो असोज १ गतेदेखि पुन नि’ षेधाज्ञा हुन्छ ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनैका लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
कोरोना रोकथाम तथा नि’ यत्रण गर्न बनेको विधेयक २०७८ ले डिसीसीएमसीलाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले २०७८ को बैशाख १६ गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा असारको दोश्रो साताबाट स्माट्र निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ।
शनिबार पनि बैंकहरु खुल्ला भएपछि पनि कर उठाउनकै लागि पनि निषेधाज्ञा खुलेको आरोपलाई अझ मजबुद् बनाएको छ। सार्वजनिक स्थान र यातायातमा हुने छलफलका बारेमा ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला कोरोनाको संक्रमणदर बढेपछि निषेधाज्ञामा जान सकिने तर्फ संकेत गर्छन्
प्रजिअ निरौलाले भने को’ रोना सं’ क्रमण दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा हुन सक्छ। हालसम्म प्रशासनले यस विषयमा छलफल गरेको छैन। हामी असारको ३०/३१ गते बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं।
भदौपछि निषेधाज्ञा भएपछि कर उठाउनकै लागि खोलिएको भन्ने संजोगमात्र हुने उनको भनाइ छ। उनले भने रोग बढेपछि निषेधाज्ञाको विकल्प हुँदैन। तर, असारमा कर उठाउनकै लागि मात्र खोलिएको भन्ने गलत हो। कोरोना सं’ क्रमणदर घटेका कारण हामीले खोलेका थियौं। बढेपछि बन्द गर्नु पर्ने हुनसक्छ। यदि यस्तो भयो भने त्यो संजोगमात्र हुन्छ।
सुन्तलस दमाई ।घरमा दुई बुहारि छन् ।आमा बेग्लै अर्कै कोठामा बस्नुहुन्छ ।कहिलेकाही त खान पाईन्छ तर धेरै जसो भोकै सुत्ने गरेको आमा बताउनुहुन्छ ।लगभक १७ -१८ बर्ष अघि श्रिमानले पनि यो संसार छाडेर गए ।आमा अहिले नितान्त एक्लो जीवन बेथित गरिरहनुभएको छ ।
आमाको एउटा हात र एउटा खुट्टा पनि चल्दैन प्यारालाईसिस भए जस्तो देखिन्छ ।चारबर्ष देखि आमामा यस्तो समस्या देखिएको हो ।एक्कासि चक्कर आएपछि एकाएक ढलियो र अन्ततः यस्तो अवस्था भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।श्रिमान क्यान्सर भएर बित्नु भएको रहेछ ।एक मुठ्ठि पानी समेत खान नपाई अनगिन्ती दिनहरु भोकै बिताएको आमा बताउनुहुन्छ ।
१७ बर्षको कलिलो उमेरमै आफुले बिवाह गरेको र श्रिमान रहुन्जेल आफुलाई अहिलेजस्तो दुख नभएको आमा बताउनुहुन्छ ।जम्मा पाच सन्तानकि आमा तिनबहिनि छोरी र दुई भाइ छोरा ।छोरा दुबै बिदेशमा अनि घरमा भएका बुहारिले आमालाई हदसम्मको पीडा दिदा रहेछन् ।आमाको यस्तो स्वास्थ्य अवस्था भैरहदा पनि कसैले कहिलेकाही चेकजाच गर्न नलगेको आमाले गुनासो गर्नुहुन्छ ।दुई छाक त खान नदिने बुहारिले उपचारको बारे त झन कसरी सोच्दा हुन र ।
Last Updated on: September 22nd, 2021 at 11:09 am
१३२९ पटक हेरिएको